Niavaka tamin'ny lafiny maro ny lanonana tetsy Mahamasina • AoRaha
Niavaka tamin’ny lafiny maro ny lanonana tetsy Mahamasina
Lanonana tsy manampaharoa. Nanetriketrika ny hetsika nentina nanamarihana ny fitokanana ny Kianja Barea Mahamasina, tamin’ny sabotsy lasa teo. Raitra sady niavaka ny teo amin’ny lanonana, izay natrehin’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry sy ny vady aman-janany ary ireo mpilalaon’ny Barean’i Madagasikara niaraka tamin’ny vahoaka malagasy.
Seho ara-javakanto nohafanaina mpanakanto fantadaza maro no nanokafana ny fiarahana ny tolakandro. Nifandimby niaka-tsehatra tao, ohatra, ry Jaojoby, Jerry Marcoss, Tence Mena sy ny maro hafa. Lampihazo voaravaka kilalaon-jiro sy zavamaneno arifomba no nanoloran’ izy ireo hira mampientanentana. Tehaka mirefodrefotra sy horakoraka tsy manam-piafarana kosa no nasetrin’ireo manam-pahefana sy olom-pirenena an’aliny tonga nanotrona teny Mahamasina.
Nanaingo ny fiarahana ihany koa ny fanentanana nataon-dry Honorat sy Eric ary Barhone. Nisongadina nandritra ny lanonana ny dihy mirindra nataon’ireo ankizy teny ambon’ny kianja. Nahafinaritra ny maso ihany koa ny nahita ireo kilonga misalotra akanjo fotsy, mena, maitso, mitaratra ny fanevam-pirenena malagasy.
Nanome tsiro hafa ny fotoana ny lalao baolina kitra tsy nampoizin’ ny rehetra, izay nifanandrinan’ny Barea sy ny ekipan’ny CFFA, tompon’ny amboaran’i Madagasikara. Isan’ny tena nahafaly ny mpanotrona teny an-toerana ny famaranana ny fiarahana tamin’ny alalan’ny fanapoahana afomanga. Hoby, tehaka, siotsioka tsy nifandrenesana no nandraisan’ny rehetra izany teny am-pitoerana. Nisy tamin’ireo mpijery tsara vintana ihany koa no nomena loka, toy ny môtô telo sy kojakoja fampiasa ao an-tokantrano sy fitaona an-dakozia maro.
Nisongadina nandritra ny lanonana ny fahaizan’ny Malagasy tonga teny an-toerana nanaraka ny toromarika sy fandaminana. Nanomboka teny am-pidirana ka hatreny am-pitoerana, dia nilamina amin’ny ankapobeny. Nanao ny asa tsara rahateo ireo mpiasan’ny minisiteran’ny Fahasalamambahoaka tamin’ny fampanarahana ny fepetra ara-pahasalamana. Toy izany koa ireo mpiambina sy mpitandro filaminana.
Voahaja ny fahadiovana na dia misy ihany aza ireo zatra ny lalandrinina amin’ny tsy fanajana fotodrafitrasa vaovao. Nilamina ihany koa ny famoahana ny olona rehefa vita ny lanonana.
« Pejy vaovao no sokafantsika androany », hoy ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, tao anatin’ny lahateny nataony, tamin’ ny sabotsy lasa teo. Nambarany fa ny Kianja Barea dia natao lapan’ ny fanatanjahatena. Manana kianja ho an’ny taranja hafa ny fotodrafitrasa, ankoatra ny ireo kianja filalaovana baolina kitra roa. “Ho an’ny Malagasy tsy ankanavaka ity kianja ity. Entanina ny rehetra hanaja sy hikolo ny fotodrafitrasa. Natao hampiombona ny Malagasy manontolo izao zava-bita izao”, hoy ny Filoha.
Nandray fitenenana ihany koa Andrianantenaina Abel Anicet, kapitenin’ny Barea, nandritra ny lanonana tetsy Mahamasina. « Hanao ny ezaka rehetra ny Barea amin’ireo lalao manaraka hanomezana fahafaham-po ny Malagasy », hoy izy.
Nampanantena ity irakiraka mpiaro ny ekipam-pirenena malagasy fa hamerina ny hafaliana ho an’ny mpiray tanindrazana. “Ho avy tsy ho ela io fotoana io. Mbola manana lalao dimy isika amin’ny fifanintsanana hiakarana amin’ny Mondial”, hoy i Abel Anicet.
Baolina kitra – « Mondial 2022 » :: Mety hisokatra kokoa ny lisitry ny Barea
Fifamaliana tao anaty fiara :: Mpamily taksibe sy ny mpanampy azy nandratra mpandeha